Haweeney la Doon Doonaayo, Markii la ogaaday in xubin ka tahay Al Shabaab oo lacago Dul Ddhigay – STAR FM SOMALIA
Booliska Kenya, ayaa maanta adduun lacageed oo dhan labaatan kun oo dollarka Mareykanka ah, waxa ay dul dhigeen haweeney lagu magacaabo Rukia Mbarak Faraj.
Haweeneydan, ayaa waxaa la sheegay inay u dhexday nin horey Ururka Al Shabaab ugu biiray, oo lagu magacaabo Ramadhan Kufungwa.
Booliska Kenya, ayaa sheegay haweeneyda la doon doonaayo in ay ku sugan tahay mid ka mid ah xeryaha qaxootiga, ee ku yaala Degmada Dhadhaab Ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Qoraal ay soo saareen Booliska Kenya, ayaa waxaa lagu sheegay Rukia Mbarak inay shaqadeedu tahay qaadista hubka iyo qaraxyada laga soo tallaabiya, xuduuda Kenya ay la lee dahay Somaliya.
Qoraalka, ayaa waxaa lagu cadeeyay xogta haweeneydan in laga helay laba qof oo dumar ah, oo toddobaadkii hore laga soo qabtay xeryaha qaxootiga ee Degmada Dhadhaab.
Labada dumarka ah ee laga soo qabtay xeryaha Dhadhaab, ayaa tallaabada lagu soo qabtay waxay timid, markii Sabtidii rag lala xiriirinaayo Shabaab, hub iyo qaraxyaba lagu qabtay Magaalada Garissa.
Sida ku cad qoraalka Booliska haweeneyda lagu magacaabo Rukia, ayaa waxay ka qayb qaadatay qaraxyo iyo dilal ka dhacay Magaalada Mombasa Ee Xarunta 2-aad Kenya.
Ciidamadii AMISOM kala Wareegi lahaa Deegaanada oo Diyaariyay Taliska Ciidanka xoogga (Sawirro)